Fanambaràna 21 - Ny Baiboly
Fanambaràna toko 21
Lanitra sy tany vaovao - Jerosalema vaovao Vadin'ny Zanak'ondry - Ny manda sy ny vavahadin'ny tanàna - Izay tempoly sy fanilon'ny tanàna.
1Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra voalohany, sy ny tany voalohany, ary tsy nisy intsony koa ny ranomasina. 2Dia indro hitako nidina avy any an-danitra ny tanàna masina avy any amin'Andriamanitra, dia Jerosalema vaovao, voahaingo toy ny vehivavy ampakarina, voaomana hihaona amin'ny vadiny. 3Ary inay nisy feo mahery reko avy ao amin'ny seza fiandrianana nanao hoe: Indro ny tranolain'Andriamanitra tonga eny amin'ny olona, ary izy hiara-monina amin'izy ireo. Izy ireo moa ho vahoakany, ary izy Andriamanitra mitoetra eny aminy kosa, ho Andriamanitr'izy ireo. 4Hofafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny mason'izy ireo, ary ny fahafatesana dia tsy hisy intsony; ny alahelo amam-pitarainana sy fahoriana koa tsy hisy intsony, fa efa lasa ny toetra taloha.
5Dia hoy ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana: Indro havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy: Soraty fa marina sy mahatoky ireo teny ireo. 6Nanaraka izany, dia hoy izy tamiko: Vita izany. Izaho no Alfà sy Omegà, fiandohana sy fiafarana. Hampitsotroiko maimaim-poana amin'ny loharanon'aina izay mangetaheta. 7Ary izay mandresy no hanana ireo zavatra ireo, ka izaho ho Andriamaniny, izy ho zanako. 8Fa ny kanosa kosa, sy ny tsy mino, ny tsy valahara, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpimasy, ny mpanompo sampy, mbamin'ny mpandainga rehetra, dia any amin'ny farihy afo aman-tsolifara mirehitra no ho anjarany; izany no fahafatesana faharoa.
9Tamin'izay, ny iray tamin'ny anjely fito nitondra ny kapoaka fito feno ny loza fito farany, dia tonga nilaza tamiko hoe: Avia fa hasehoko anao ny Vehivavy ampakarina ho Vadin'ny Zanak'ondry. 10Dia nentiny am-panahy tany amin'ity tendrombohitra sady lehibe no avo aho, ka nasehony ahy ny tanàna masina, dia Jerosalema nidina avy any an-danitra, avy amin'Andriamanitra. 11Namirapiratry ny voninahitr'Andriamanitra izy, ary voazavan'ny kintana toy ny vato sarobidy, dia ny vato jaspa izay azo itarafana toy ny kristaly. 12Sady avo no lehibe ny mandany, ary roa ambin'ny folo ny vavahadiny; nisy anjely roa ambin'ny folo tamin'ireo vavahady ireo, ary nisy anarana voasoratra koa, dia ny anaran'ny foko roa ambin'ny folon'ny zanak'Israely. 13Vavahady telo no eo atsinanana, vavahady telo no eo avaratra, vavahady telo no eo atsimo, vavahady telo no eo andrefana. 14Misy vato fanorenana roa ambin'ny folo ny mandan'ny tanàna; ary misy anarana roa ambin'ny folo amin'ireo, dia ny anaran'ny Apostoly roa ambin'ny folon'ny Zanak'ondry.
15Nitondra volotara volamena fandrefesana ilay niteny tamiko, mba handrefesany ny tanàna sy ny vavahadiny ary ny mandany. 16Efa-joro ny tanàna, ary nitovy ny halavany sy ny sakany. Dia nandrefy ny tanàna tamin'ny volotarany izy, ka roa arivo sy iray alina stady, ary nitovy ny halavany sy ny sakany ary ny hahavony. 17Norefesiny koa ny mandany ka efatra amby efa-polo amby zato hakiho araka ny refin'ny olona sy ny an'ny anjely koa. 18Vato jaspa no nanaovana ny mandan'ny tanàna; ary tena volamena madio toy ny fitaratra kristaly ny tanàna. 19Voaravaka vatosoa isan-karazany ny vato fanorenana ny mandan'ny tanàna. Jaspa ny fanorenana voalohany, safira ny faharoa, kalsedoana ny fahatelo, emeraoda ny fahefatra, 20sardoniksa ny fahadimy, sardoana ny fahenina, krisaolita ny fahafito, berila ny fahavalo, taopazy ny fahasivy, krisaopazy ny fahafolo, hiasenty ny faharaika ambin'ny folo, ary ametista ny faharoa ambin'ny folo. 21Ny vavahady roa ambin'ny folo dia voahangy roa ambin'ny folo, fa voahangy iray ihany ny vavahady iray, ary ny lalamben'ny tanàna dia tena volamena madio, manganohano hoatra ny fitaratra.
22Tsy nahita tempoly tao aho, fa ny Tompo Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy ny Zanak'ondry no tempoliny. 23Tsy mila masoandro ny tanàna, na volana hanazava azy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no mamirapiratra ao aminy, ary ny Zanak'ondry no fanilony. 24Ny firenena rehetra handeha amin'ny fahazavany, ary ny mpanjakan'ny tany hitondra ny fiamboniany ao aminy. 25Tsy hihidy ny vavahadiny isan'andro, fa ny alina tsy mba hisy ao aminy. 26Ny laza aman-java-tsoan'ny firenena rehetra ho tapitra ao avokoa; 27ary tsy hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra anarana ao amin'ny bokin'ny fiainan'ny Zanak'ondry ihany. >